Gobolada News Agency » Maamulka Warbaahinta gobolada.com oo guud ahaan Umadaha Islaamka iyo Soomaalida ugu hambalyeeyneysa Bilashada Bisha Ramadaan.
Maamulka Warbaahinta gobolada.com oo guud ahaan Umadaha Islaamka iyo Soomaalida ugu hambalyeeyneysa Bilashada Bisha Ramadaan.
Jun 17, 2015 - jawaab
Maamulka iyo howlwadeenada kala duwan ee Shabakadda Caalamiga ah ee gobolada.com waxay Hambalyo ku aadan bilashada bisha qeyrka iyo fadliga badan ee Ramadaan Awgeed halkan u marinaynaa Dhammaan Umaddaha Islaamka oo ay Soomaalida ka midka tahay.
“Aad iyo Aad ayay Farxad iyo reyn reyn inoogu tahay haddii aynu nahay maamulka iyo howlwadeenada Shabakadda gobolada.com in aan halkan idin soo marino hambalyo ku aadan bisha qeyrka iyo cibaadada badan ee Ramadaan oo maalinta barito ah ku began…”.
Dalka Sacuudiga ayaa caawa si rasmi ah looga dhawaaqay in maalinta barito ah ay tahay maalin Ramadaan.
Sidoo kale Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa caawa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday in bari si guud looga soomayo Dalka Soomaaliya iyo waliba dalalka kale ee Islaamka.
Ugu danbeentii mar kale iyo mar kale haddii aynu nahay maamulka iyo howlwadeenada gobolada.com waxaan ugu hambalyeeyneynaa umadeena Muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo akhristayaasha sharafta leh bilashada bisha la wada sugayay ee Ramadaan.